Ultra HD 4K PTZ Camera-UV420 ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Minrray
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > 4K PTZ ကင်မရာ > Ultra HD 4K PTZ ကင်မရာ -UV420
Ultra HD 4K PTZ Camera-UV420 သည်ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးသည်။ စွမ်းဆောင်ချက်များတွင်ခိုင်မာသောအနက်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရောင်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသောကြည်လင်သောပုံရိပ်များကိုထောက်ပံ့ရန်အဆင့်မြင့်သော ISP အပြောင်းအလဲဆိုင်ရာ algorithms များပါဝင်သည်။
The Ultra HD 4K PTZ ကင်မရာ -UV420 offers perfect functions, superior performance and rich interfaces. The features include advanced ISP processing algorithms to provide vivid images withastrong sense of depth, high resolution, and fantastic color rendition.
၁ / ၂.၈ & ၁ / ၂.၅ လက်မအရည်အသွေးရှိသော 4K SONY CMOS အာရုံခံကိရိယာ; 8.51 megapixel, resolution သည် 4K (3840x2160) ရှိပြီး 1080P, 720P နှင့်အခြား resolution တို့ဖြင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ 4K 60FPS
ပုံရိပ်ချဲ့စရာမလိုဘဲ 70 ° & 80 °FOVရှိသော 12X နှင့် 5X optical zoom မှန်ဘီလူး။
HDMI, USB3.0 နှင့်LANသည်အသံဗွီဒီယို output ကိုထောက်ပံ့သည်
.multiple USB Compression Encoding အမျိုးအစား -
YUY2, MJPEG, H.264, NV12 ဗွီဒီယို encoding အမျိုးအစားများကိုထောက်ပံ့ပါ
Audio Compression စံသတ်မှတ်ချက်
Audio-in က AAC, MP3 နှင့် G.711A အသံချုံ့မှုကိုပံ့ပိုးပေးတယ်၊ 8000,16000,32000,44100,48000 နမူနာကြိမ်နှုန်း
ပါ ၀ င်သည့်ဆွဲငင်အားအာရုံခံသည် PTZ အလိုအလျောက်လှန်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်သည်၊ တပ်ဆင်ရန်လွယ်သည်။
ONVIF, GB / T28181, RTSP, RTMP protocols များကိုထောက်ပံ့သည်။ streaming server (Wowza, FMS) နှင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သော RTMP push mode; RTP multicast mode; VISCA ထိန်းချုပ်မှု protocol ကို
.Wireless ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု (optional ကို):
UV420A: 12X မှန်ဘီလူး
UV420B: 5X မှန်ဘီလူး
မော်ဒယ် UV420A UV420B
FOV အလျားလိုက်: 6.55Ëšï¼ˆteleï¼ ï½ 69ž69.4Ëšï¼ˆwideï¼ ‰ အလျားလိုက်: 26.51 °ï¼tele‰ï½ž79.18° ï¼ˆwideï¼ ‰
ဒေါင်လိုက်: 3.66Ëšï¼ˆteleï¼ ï½ 42ž42.8Ëšï¼ˆwideï¼ ‰ ဒေါင်လိုက်: 15.29 ° ï¼ˆteleï¼ ‰ž49.22° ï¼ˆwideï¼ ‰
aperture F1.6- F2.8 ± 5% F2.0 - F2.8 ± 5%
Image Sensor 1 / 2.8 လက်မ SONY CMOS အာရုံခံကိရိယာ 1 / 2.5 လက်မ SONY CMOS အာရုံခံကိရိယာ
ထိရောက်သောပစ်ဇယ်များ 8.51M; 16:98.51M; ၁၆: ၉
ဗွီဒီယိုအမျိုးအစား HDMIVideo Output အမျိုးအစား -
အနည်းဆုံး illumination 0.05Lux (F1.8, AGC ON)
White Balance အော်တို / လက်စွဲ / တ ဦး တည်း Push ကို / သတ်မှတ်ထားသော ColorTemperature
အာရုံစူးစိုက် အော်တို / လက်စွဲစာအုပ် / တစ်ခုတည်း Push ကို
Exposure mode အော်တို / လက်စွဲ / ရှပ်တာ ဦး စားပေး / AperturePriority / Brightness Priority
aperture F1.8 - F11, အနီးကပ်
ရှပ်တာမြန်နှုန်း 1/25 - 1/10000
dynamic အကွာအဝေး OFF / Dynamic အဆင့်ညှိယူ
ဗွီဒီယိုညှိနှိုင်းခြင်း တောက်ပမှု၊ အရောင်၊ အဖြူရောင်၊ Contrast၊ Sharpness၊ B / W စနစ်၊ Gamma curve
SNR â 50dB â
Interfaces USB2.0ï¼ˆ အမျိုးအစား B၊ USB2.0ï¼ compatible၊ A-IN, RS232-in & out နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော HDMI,LAN(POE)၊
RS482ï¼‰၊ Dial switch, DC12V, Power Switch နှင့်လိုက်ဖက်ကိုက်ညီမှုရှိသည်
ဗွီဒီယိုချုံ့ခြင်း LAN: H.264, H.265
audio-in ကို interface 3.5mm linear Input ကိုနှစ်ချက်လမ်းကြောင်း
အသံထွက် HDMI, LAN, USB3.0
အသံချုံ့ AAC, MP3, G.711A
LAN 10M / 100M / 1000M လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် Ethernet port၊ supportPOE နှင့် audio / video output
ကွန်ယက်ပရိုတိုကော RTSP, RTMP, ONVIF, GB / T28181, VISCA ControlProtocols, Remote Upgrade, reboot နှင့် reset
Control Interface RS232-IN၊ RS232-OUT, RS422 (သဟဇာတဖြစ်သောRS485)
Serial Protocol ကို VISCA / Pelco-D / Pelco-P; Baud ရှားပါး: 115200/38400/9600/4800/2400
USB ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကော UVCï¼ˆvideoï¼ ï¼ŒUACï¼ˆaudioï¼ ‰
ပါဝါ Interface HEC3800 ထွက်ပေါက် (DC12V)
ပါဝါ Adapter input: AC110V-AC220V; output: DC12V / 2.5A
input ဗို့အား DC12V ± 10%
PanRotation -170 ဒီဂရီ + 170 °
စောင်းလှည့် -30 ° + + 90 °
ပန်ထိန်းချုပ်မှုမြန်နှုန်း 0.1 ° / sï½ï½100° / s
စောင်းထိန်းချုပ်မှုမြန်နှုန်း 0.1 ° / sï½45° / s
ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအမြန်နှုန်း Pan: 100 ° / sï¼ŒTilt: 45 ° / s
ကြိုတင်နံပါတ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု (၂၅၅) ခု (အဝေးထိန်းမှ ၁၀ ကြိုတင်ထား)
ကျောက်တံတားမြို့နယ် -10â "+ž + 60" "
စိုထိုင်းဆသိုလှောင် ၂၀% 95ж95%
အလုပ်လုပ်အပူချိန် -10â„ +ž + 50âƒ
အလုပ်လုပ်စိုထိုင်းဆ ၂၀% - ၈၀%
အတိုင်းအတာ 181ï¼ˆLï¼ ‰ mm × 115mmï¼ˆWï¼ 14 × 149mmï¼ˆHï¼ ï¼
အလေးချိန် (ဝန်းကျင်) 1.15 ကီလိုဂရမ်
အထုပ် Power supply၊ RS232 control cable၊ USB3.0 ဆက်သွယ်မှု cable၊ Remote controller, User Manual
Optional ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မျက်နှာကျက် / Wall Mount (အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်)